AfricArXiv waxay heshay JROST Jawaab Degdeg ah - AfricArXiv
Published by AfrikArXiv on 17th Diisembar 2020 17th Diisembar 2020
Ka dib markii aan kaqeyb galnay shirkii JROST 2020, waxaa sharaf noo ah inaan wadaagno in naloogu abaalmariyay $ 5,000 abaalmarinteenna xagga horumarinta furfurnaanta cilmi baarista iyo deeqda waxbarasho ee guud ahaan Afrika. AfricArXiv waxay ka mid tahay sideeda abaalmarin ee sanduuqa jawaabta; oo ay weheliso La Referencia - Goobaha-furitaanka - Dib u eegis - waqtiga - 2i2c - Bani'aadamnimada Wadaagga - Shaybaarka Aqoonta Sayniska.
Waxaan ku faraxsanahay inaan ka mid noqonno dadka qaata sanduuqa JROST. AfricArXiv, oo ah Furanta Furan ee 'Open African' iyo bogga hore ee 'preprint portal', ayaa la bilaabay Juunyo 2018 illaa iyo haddana waxaa lagu maamulay laguna dayactirayaa tabarucaad noocee ah xubnaha kooxda u heellan, asxaabteena iyo saaxiibbadeen. Abaalmarintu waxay xoojin doontaa shaqada bulshadayada si aan u taageerno aqoonyahannada Afrikaanka ah si ay u gaaraan guulahooda iyo natiijooyinkooda mid laga heli karo helitaanka Furan iyo rukhsadda ku habboon. Hadda waxaan xallin karnaa qaar ka mid ah kharashyadayada, waxaan bilaabi karnaa hirgelinta khariidadeena, oo waxaan u diyaarin karnaa ururinta soo socota iyo dhismaha iskaashiga istiraatiijiyadeed ee nidaamka deegaanka ee SciComm ee Afrika.
ayuu yidhi Johannsen Obanda, Maamulaha Bulshada ee AfricArXiv
[Ka soo Websaydhka IOI]
The JROST Sanduuqa Jawaabta Degdegga ah ayaa la bilaabay si loo abuuro qaab dib loogu celiyo kaabayaasha furan iyo bulshada tiknoolajiyada. Abaalmarintu waxay u dhexeysaa $ 5,000 ilaa $ 10,000 USD, waxaana loogu talagalay waxqabadyada lama huraanka ah oo aan suurta gal ahayn, ama khatar gelin doonta, la'aantood.
Sanduuqa bilowga ah ee sanadkan waxaa suurta galiyay deeqsinimada Hindisaha Chan Zuckerberg, Crossref, ITHAKA, Mala-awaal, Iyo Maalgeli kaabayaasha Furan. Waxaan sidoo kale u mahadnaqaynaa dhammaan kafaala qaadayaashayada, iyo sidoo kale guddiga abaalmarinta JROST iyo guddiga barnaamijka taageeradooda.
Nagu soo biir si aad wax ugu biiriso shaqadeena adoo maraya furancollective.com/africarxiv; waxbadan ka akhriso africarxiv.org/contribute/
Ku Saabsan Maalgelinta Kaabayaasha Furan
Maalgeli kaabayaasha Furan (IOI) waa dadaal loogu talagalay hagaajinta maalgelinta iyo kaydinta tikniyoolajiyada furan iyo nidaamyada taageeraya cilmi baarista iyo deeqda waxbarasho. Waxaan tan ku sameeynaa annagoo iftiiminayna caqabadaha, sameyneyna cilmi baaris, lana shaqeyneyno kuwa go'aanka gaara si aan u dhaqan galino isbeddel.
Ku saabsan JROST
Khariidadda Wadajirka ah ee Qalabka Sayniska Furan (JROST) waa hindisaha bulshada ee IOI oo ka shaqeynaya khariidad wadajirka ah oo loogu talagalay qalabka sayniska furan.
Tags: AwardJROSTsayniska furanDeeqda